Sawirro-Madaxweynaha Puntland iyo waftigiisii oo gaarey Bandar-bayla. – Radio Daljir
Sawirro-Madaxweynaha Puntland iyo waftigiisii oo gaarey Bandar-bayla.
Janaayo 27, 2017 9:23 g 0
Bandar-bayla, Jan 28 2017-Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kormeer shaqo ku marayey gobolada Bari iyo Karkaar ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey degmada Bandar-bayla ee gobolka Karkaar.
Madaxweynaha iyo weftigiisa ayaa intaanu soo gaadhin Degmada Bayla waxaa uu kusoo hakaday oo si weyn loogu soo dhaweeyey magaalooyinka Mareer, Qoton iyo deegaano beeleedyo kale.
Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa kulan la qaatay shacabkii iyo masuulinyiintii Magaalada Mareer ee gobolka karkaar, halkaasi oo Madaxweynahu kulan is xog waraysi ah la qaatay dadkii reer guuraaga ahaa ee ka soo hayaamay galbeedka. waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya.
Sidoo kale madaxweynuha Dawladda Puntland ayaa laqaatay kulan waxgaradka Magaalada Qotan, Madaxweynaha oo lahadlay shacabka magaaladaasi ayaa waxa uu ku amaanay soo dhoweynta iyo marti soorka ay ku qaabileen walaalahooda Soomaaleyeed ee ka soo hayaamay abaarta baaxadaleh ee ka jirta guud ahaan Soomaaliya, abaartaasi oo dhalisay in dadku ka soo hayaamaan degaankooda.
Madaxweynaha Dawladda Puntland oo la hadlayey dadkii soo hayaamay ayaa sheegay in Dawladda Puntland iyo shacabkeeduu aanay ka daali doonin gurmadka iyo ogaanshaha dadkooda Soomaaliyeed ee abaartu saamaysay.
Dhinac kale Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo weftiga uu hogaaminayey ayaa gaarey maanta gelinkii danbe degmada Bandar-Bayla ee gobolka karkaar, halkaasi oo waxgaradka, haldoorka, aqoon yahanka ururada haweenka, kuwa dhalinyada, ciyaartoyda, bahda waxbarashada iyo maamulka degmadu ay si diiran ugu soo dhoweyeen madaxweynaha iyo weftigiisa.
Ugu danbayn. Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa waxaa uu safar kusii galaabixindoonaa qaybo badan oo ka mida Gobolda Karkaar iyo Bari maalamaha fooda inagu soo haya tan iyo inta uu dib ugu laaban doono magaalada Garoowe ee caasimada Dawlada Puntland.